Bhuku Rekutanga raSamueri 23:1-29
Dhavhidhi anonunura guta reKeira (1-12)
Sauro anotevera Dhavhidhi (13-15)
Jonatani anosimbisa Dhavhidhi (16-18)
Dhavhidhi anopotsa abatwa naSauro (19-29)
23 Nekufamba kwenguva, Dhavhidhi akaudzwa kuti: “VaFiristiya vari kurwisa Keira,+ uye vari kupamba nzvimbo dzekupurira.” 2 Saka Dhavhidhi akabvunza Jehovha+ achiti: “Ndiende kunouraya vaFiristiya ava here?” Jehovha akati kuna Dhavhidhi: “Enda uuraye vaFiristiya vacho, wonunura Keira.” 3 Asi varume vaDhavhidhi vakati kwaari: “Onai, tiri kutya tichiri muno muJudha;+ ko kuzoti tikaenda kuKeira kunorwisa uto revaFiristiya!”+ 4 Saka Dhavhidhi akabvunzazve Jehovha.+ Jehovha akamupindura kuti: “Gadzirira udzike kuKeira nekuti ndichaisa vaFiristiya muruoko rwako.”+ 5 Saka Dhavhidhi akaenda nevarume vake kuKeira, akarwa nevaFiristiya; akatora zvipfuwo zvavo, akauraya vakawanda kwazvo uye Dhavhidhi akanunura vagari vemuKeira.+ 6 Abhiyatari+ mwanakomana waAhimereki paakatizira kuna Dhavhidhi kuKeira, akaenda neefodhi.* 7 Sauro akaudzwa kuti: “Dhavhidhi ava kuKeira.” Sauro akabva ati: “Mwari amuisa* muruoko rwangu,+ nekuti azvivharira ega nekupinda kwaaita muguta rine magedhi nemazariro.”* 8 Sauro akabva ashevedza vanhu vese kuti vaende kuhondo. Akavashevedza kuti vadzike kuKeira kunokomba Dhavhidhi nevarume vake. 9 Dhavhidhi paakaziva kuti Sauro akanga achimurongera zvakaipa, akati kumupristi Abhiyatari: “Uya neefodhi kuno.”+ 10 Dhavhidhi akabva ati: “Jehovha Mwari waIsraeri, chokwadi mushumiri wenyu anzwa kuti Sauro ari kuda kuuya kuKeira kuzoparadza guta pamusana pangu.+ 11 Vatungamiriri veKeira* vachandiisa muruoko rwake here? Sauro achadzika kuno sekunzwa kwaita muranda wenyu here? Jehovha Mwari waIsraeri, ndapota udzai muranda wenyu.” Jehovha akabva ati: “Achauya.” 12 Dhavhidhi akabvunza kuti: “Vatungamiriri veKeira vachandiisa ini nevarume vangu muruoko rwaSauro here?” Jehovha akapindura kuti: “Vachakuisa muruoko rwake.” 13 Dhavhidhi akabva angosimuka nevarume vake vanenge 600,+ uye vakabva muKeira ndokufamba vachienda chero kwavaingoona kuti kunoita. Sauro paakaudzwa kuti Dhavhidhi akanga atiza muKeira, haana kumutevera. 14 Dhavhidhi akagara murenje munzvimbo dzakaoma kusvika, munharaunda ine makomo murenje reZifi.+ Sauro akaramba achimutsvaga,+ asi Jehovha haana kumuisa muruoko rwake. 15 Dhavhidhi paakanga ari murenje reZifi kuHoreshi, aiziva kuti* Sauro akanga abuda achitsvaga kumuuraya.* 16 Panguva iyi, Jonatani mwanakomana waSauro akabuda akaenda kwaiva naDhavhidhi kuHoreshi, uye akamubatsira kuti awane simba* muna Jehovha.+ 17 Akati kwaari: “Usatya, nekuti baba vangu Sauro havasi kuzokuwana; iwe uchava mambo weIsraeri,+ uye ini ndichava wechipiri kubva kwauri; uye baba vangu Sauro vanotozvizivawo.”+ 18 Vaviri ava vakabva vaita sungano+ pamberi paJehovha, uye Dhavhidhi akaramba achigara muHoreshi, asi Jonatani akaenda kumba kwake. 19 Gare gare varume vekuZifi vakaenda kuna Sauro kuGibhiya,+ vakati: “Dhavhidhi haana here kuhwanda pedyo nesu+ munzvimbo dzinonetsa kusvika kuHoreshi,+ pachikomo cheHakira,+ chiri kumaodzanyemba* kweJeshimoni?*+ 20 Uyai chero pamunenge mada kuuya, haiwa mambo, uye tichamuisa muruoko rwamambo.”+ 21 Sauro akabva ati: “Jehovha ngaakukomborerei nekuti mandinzwira tsitsi. 22 Ndapota endai muedze kutsvaga paari chaipo uye kuti ndiani akamuona ikoko, nekuti ndakaudzwa kuti ari kuchenjerera zvikuru. 23 Nyatsoonai kuti nzvimbo dzese dzaanohwanda ndedzipi, modzoka kwandiri neuchapupu. Ndichabva ndaenda nemi, uye kana ari munyika ino, ndichamutsvaga pakati pezviuru zvese zvaJudha.”* 24 Saka vakasiya Sauro vakatungamira kuZifi,+ Dhavhidhi nevarume vake vari murenje reMaoni+ muArabha+ kumaodzanyemba kweJeshimoni. 25 Sauro akabva auya nevarume vake kuzomutsvaga.+ Dhavhidhi paakaudzwa nezvazvo, akabva angodzika kudombo guru,+ akagara murenje reMaoni. Sauro paakazvinzwa, akatevera Dhavhidhi kusvika murenje reMaoni. 26 Sauro paakasvika kune rimwe divi regomo, Dhavhidhi nevarume vake vaiva kune rimwe divi regomo racho. Dhavhidhi akanga achikurumidza kuti atize+ Sauro, asi Sauro nevarume vake vakanga vava kutosvika pedyo naDhavhidhi nevarume vake kuti vavabate.+ 27 Asi nhume yakasvika kuna Sauro ichiti: “Kurumidzai kuuya, nekuti vaFiristiya vapinda munyika!” 28 Sauro akabva arega kutevera Dhavhidhi,+ akaenda kunorwisa vaFiristiya. Ndokusaka vakatumidza nzvimbo iyoyo kuti Dombo Rekuparadzana. 29 Dhavhidhi akabva ipapo, akatanga kugara munzvimbo dzakaoma kusvika kuEni-gedhi.+
^ ChiHeb., “amutengesa.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Varidzi venyika yeKeira.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “aitya nekuti.”
^ ChiHeb., “akasimbisa ruoko rwake.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “kwegwenga; kwerenje.”
^ Kana kuti “pemhuri dzese dzaJudha.”